ဧရာဝတီ| November 30, 2011 | Hits:746
6 | | အိမ်ခြံမြေနှင့် ကားဈေးကွက် အပြောင်းအလဲ ကြီးမားမှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ရွှေဝယ်သူ အလွန် နည်းပါးပြီး ပြန်လည် ရောင်းချသူ များပြားနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာသံရုံးဗုံး မသင်္ကာသူ ၇ ဦး ပစ်သတ်ခံရ၊ ၆ ဦးဖမ်းမိ
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးကို ဘယ်သူ ဦးဆောင်မလဲ
6 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website joker November 30, 2011 - 1:13 pm	အိမ်လေးရေ….
ရန်ကုန်ကို အာရှအကောင်းဆုံးမြို့ အဖြစ် ဖန်တီးရေး ဗဟာဗျူဟာ YHT ထုတ်ပြန်